Hihaona Mafana koreana ny Vehivavy Amin'ireo Soso-kevitra
Hihaona Mafana koreana ny Vehivavy Amin’ireo Soso-kevitra
Izy ireo no anisan’ny tsara indrindra ao Azia, raha ny hevitro. Fa efa nanao hoe: — ry zareo tsy ny mora indrindra mba hihaona. Na dia fony aho monina any Korea, dia nanana fotoana mafy mahazo miresaka koreana vehivavy satria Tsy fantatro izay tokony hatao.
-)Ka ahoana no afaka mahazo ny tenanao teo anoloan’ny koreana ny vehivavy. Inona no afaka miresaka mikasika izay hahatonga azy ho te-hiresaka indray? Fa izany rehetra izany dia ho toy izany koa rehefa miresaka ny mafana ny vehivavy any an-tranony. Misy fomba telo dia afaka hihaona koreana vehivavy ivelan’ny aterineto — dia afaka hihaona koreana vehivavy manodidina anao. Raha mipetraka any Korea, dia afaka fotsiny mivoaka ny varavarana. Raha tsy izany, ianao dia afaka mahita ny fiaraha-mikorana, na koreana zava-nitranga izay be dia be ny koreana zazavavy any. Afaka manao fikarohana amin’ny aterineto, na manontany ny manodidina. Na ahoana na ahoana dia tsy maintsy ho mpomba ny mazoto. online — afaka hiaraka iray amin’ireo ambony koreana mampiaraka toerana mba hahazo anao nanomboka. Raha vao ianao efa napetraka ny mombamomba ireo toerana dia hametraka anao hifandray amin’ny koreana tokan-tena. Ara-tsosialy fampidiran-dresaka — moa Ve ianao manana namana avy any Korea. Izy ireo dia afaka hampahafantatra anao ny vehivavy tokan-tena izy ireo raha toa ka tia anao. Ho ahy manokana, tiako ny hihaona vehivavy ivelan’ny aterineto raha toa aho ka mikasika azy. Marina fa be dia be mora kokoa ny fony aho tany Korea. Ary izay tsy miaina any intsony aho mijery manao bebe kokoa online hihaona upas ny andeha ianao hoe hihaona mafana ny vehivavy eo an-toerana — inona no holazainao. Andeha ataovy mora ho izy roa ianao. Hahita zavatra iray loha ny miresaka momba ny — No hitsena azy an-tserasera na ivelan’ny aterineto. Afaka manomboka ny resaka mikasika ny zavatra voamariko momba azy. Dia izy manao fehin-ao ny sary (na eo amin’ny fiainana tena izy)? Afaka manontany azy izay izy nahazo izany. Tsy maninona raha toa ianao ka sahiran-tsaina rehefa aloha ny miresaka azy. Mety ho izy no sahiran-tsaina ihany koa. Raha ny marina dia mampiseho fa ianao mailo ara-tsosialy ary izany dia hahatonga ny aina kokoa ny miresaka aminao. Hangataka azy ho lalana — Io no tranainy indrindra fitaka ao amin’ny boky fa mbola miasa toy ny hatsarany. -) Hiakatra ho azy sy hangataka azy ho lalana any amin’ny toerana sasany. Lazao azy ianao dia tokony hihaona ny namana ary tsy azo antoka ny fomba mahazo any. Milay ianao dia afaka manao izany voly amin’ny alalan’ny fangatahana azy noho ny fanondroana ny toerana misy anao amin’izao fotoana izao ny roa ireo. Rehefa nilaza ianao fa ianao ‘eto’ ny efa — hanome azy ny ankihiben-tànany izy ary niteny hoe: ‘asa tsara. ‘-)’Tsy izany asa izany eo amin’ny ‘misy’ ny vehivavy. ‘Tsy azoko antoka fa izany tena miasa amin’ny mafana ao an-toerana ny ankizivavy. Amin’ny ankapobeny, tsy toy ny ‘bitchy’ ny maha-vehivavy any an-tranony. Avy eo indray raha tsy te hiresaka aminao, ry zareo miala. Hoe: — inona ny zava-dehibe dia tsy inona ianao no manomboka ny resaka. Ny zava-dehibe dia ny fomba hanohy ny resaka. Raha vao ianao efa nanomboka ny resaka dia afaka manapaka izany ary anontanio azy hoe aiza izy no avy. Izy no milaza hoe ‘Koreana’. Dia lazao azy fa izy no mandainga sy izay izy no tena avy ao Afrika (Kenya mba ho marina. Izy toa izy fast mpihazakazaka. in-avy hoy ianao nihomehy. Eny, ny sasany dia ho tafintohina momba ny maha-heverina ho Afrikana, (izay hitako mampihomehy an-dalana) fa milay miaraka amin’izy ireo, dia marina. ireo mety na dia hoe ‘tsy tokony stereotype’ fa mba milay aminy towaways — indray mandeha izy dia mihomehy avy eo dia afaka miteny hoe: ‘tiako ny fahazakàna hanihany sy mihomehy, inona ny anarany. ‘Ary dia nahazo ny baolina rolling.
Azonao atao mihitsy aza manana izany resaka an-tserasera ihany koa. Fotsiny ho azo antoka mametraka ‘smiley’ endrika ka fantany ianao mamazivazy. Afaka manampy izany (vao mandika sy mametaka.) Noho izany, inona no miandry azy? Ianao mahalala izay mba hitsena azy sy izay holazaina. Ny zavatra farany ilainao dia ny hahafantatra ny fomba hahazoana sexy koreana ankizivavy mihomehy. Fampitandremana. Raha vao fantatrao ny fomba hanaovana izany ianao hahazo mpifoka miresaka amin’ny ao an-toerana ny vehivavy. Izany no nanjo ahy, ary izaho aza mieritreritra ny fiankinan-doha dia mbola mandeha lavitra. Marina fa tsy toy ny tiako izany na. -) ‘Dan fotoana Fivelaran’ny tena za-draharaha, ny tena manam-pahalalana, ary tsara ny mpampianatra. Izy no nahazo ny fahatakarana lalina ny rehetra mampiaraka dingana ao amin’ny firenena Aziatika. ‘
← Mahafinaritra Soso-kevitra ho an'ny Fiarahana-Lehilahy koreana
Chat - Mahita vaovao Ankizivavy ao Korea Atsimo noho ny mifampiresaka - Video Mampiaraka →